Nhau - Unoziva here inotsika mota
Inokurumidza mota ndeye yakavhurika-chiuno chinodzora chinhu chinoshandura magetsi ekupisa chiratidzo kuita angular kusuduruka kana mutsara mutsara. Panyaya yekusawandisa, mota kumhanya, kumira chinzvimbo chete kunoenderana nekutenderera kwechiratidzo maficha uye nhamba yekupururudza, uye haina kukanganiswa nekuchinja kwemutoro, ndiko kuti, kuwedzera chiratidzo chekupomba kumota, mota ichatendeuka. danho Angle. Kuvapo kweiyi hukama hwehukama, pamwe neanotsika mota chete nguva yekukanganisa uye hapana kuwedzera kwekukanganisa zvichingodaro. Inoita kuti zvive nyore kwazvo kushandisa inotsika mota kudzora kumhanya, chinzvimbo uye dzimwe nzvimbo dzekutonga.
1.Stepper mota maficha
<1> iyo Rotation Angle inoenderana neyakaiswa pulse, saka izvo zvinodiwa zveiyo chaiyo chaiyo Angle uye yakakwirira chaiyo yekumisikidza inogona kuwanikwa nekushandisa yakavhurika chiuno kudzora.
<2> kutanga kwakanaka, kumira, kupindura kwakanaka uye kwakashata, kudzora kuri nyore.
<3> nhanho imwe neimwe yekukanganisa kweAngle idiki, uye hapana kukanganisa kunowedzera.
<4> mukati meiyo inodzorwa renji, kumhanya kwekutenderera kwakaringana nekuwanda kwekupomba, saka huwandu hwekutapudza hwakafara kwazvo.
<5> pazororo, yekumhanyisa mota ine yakakwira yekubata torque yekugara munzvimbo yekumira, pasina chikonzero chekushandisa brake kuitira kuti irege kutenderera zvakasununguka.
<6> ine yakakwira kwazvo RPM.
<7> kuvimbika kwepamusoro, hapana kugadzirisa, mutengo wakaderera wesisitimu yese.
<8> nyore kurasikirwa nhanho nekukurumidza kumhanya
<9> inowanzo gadzira vibration kana resonance phenomenon pane imwe frequency
2.Terminology yeanotsika mota
* Phase nhamba: iyo logarithm yemakoroni ekutsvagisa ayo anogadzira akasiyana magineti minda emapango N uye S. M inowanzo shandiswa.
* Nhamba yematanho: Huwandu hwepulses hunodiwa kuti upedze iyo nguva nenguva shanduko yemagineti kana iyo mamiriro ekumiririra anomiririrwa neN, kana huwandu hwenhanho dzinodiwa kuti mota itenderedze zino kukanda Angle. Tora iyo yechina-chikamu mota semuenzaniso, pane ina-nhanho ina-nhanho kuuraya maitiro, anoti AB-BC-CD-DA-AB, mana-chikamu masere-nhanho maitiro ekuuraya, anoti A-AB-B-BC- C-CD-D-DA-A.
* Nhanho Angle: inoenderana nechiratidzo chekupomba, iko kusuduruka kweiyo mota rotor inomiririrwa. = 360 madhigirii (nhamba yemazino ejorori J * nhamba yematanho ekutonga). Tora yakajairika maviri-chikamu uye ina-chikamu mota ine rotor meno semuenzaniso we50-zino mota. Kune mana-nhanho kuuraya, danho Angle iri = 360 madigiri / (50*4)=1.8 madhigirii (anowanzozivikanwa sedanho rese), nepo pakuita masere-nhanho kuuraya, danho Angle iri = 360 madigiri / (50 * 8) = 0.9 madhigirii (anowanzozivikanwa sehafu nhanho).
* Positioning torque: kana mota isina kusimbiswa, iyo yekukiya torque yemota rotor pachayo (inokonzerwa nemaharmonics ezino chimiro cheiyo magnetic munda uye zvemagetsi zvikanganiso).
* Static torque: iyo yekukiya nguva yemota shaft kana mota isiri kutenderera pasi yakatarwa yekumira yemagetsi chiito. Iyi torque ndiyo chiyero chekuyera vhoriyamu (geometric saizi) yemota uye yakazvimiririra kune yekutyaira voltage uye magetsi magetsi. Kunyangwe iyo static torque iri yakaenzana nenhamba yemagetsi emagetsi ekutsvaira ampere-anotendeuka uye ane hukama nemukaha wemhepo pakati peiyo yakagadziriswa-giya rotor, hazvikurudzirwe kudzora zvakanyanya gwanza remhepo uye nekuwedzera kufadza ampere-kutendeuka kuvandudza iyo inomira torque, iyo inokonzeresa mota kudziyisa uye mechnical ruzha.
Ac Stepper mota, 220 Volt Ac Servo mota, Yakavharwa Loop Stepper mota Mutyairi, 6 Waya Stepper mota, Servo Motor Actuator, Mbeu dzakauchikwa Stepper mota,